ပို့စ်တင်ချိန် - 4/13/2014 02:17:00 PM
(၁)4hours ago Facebook
ဆရာ သမီးကကိုယ်ဝန် (၇) လရှိပါပြီ။ တချို့က ရိုးရိုးမွေးတာကောင်းတယ်၊ တချို့က ခွဲမွေးတာကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြပါတယ်ဆရာ။ သမီးအတွက်က ဘယ်လိုမွေးမွေးရပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမွေးရင် ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော်ဆရာ။
(၂) Feb 22, 2011 at 5:49 PM
ကလေးမွေးရင် ရိုးရိုး မွေးတာနဲ့ ခွဲမွေးတာ ဘာတွေ ကွာခြားပါသလဲ။ ဘယ်လို အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ။ လူတော်များများက ခွဲမွေးတာ လူကြီးအတွက် မကောင်းဘူး ပြောနေကြလို့ပါ။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ရန်ကုန်မှာ ဆိုတော့ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေက ပြောတာလဲ ရမ်းမယုံရဲပါဘူး။ ခွဲမွေးပြီးရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ မိခင်ရော ကလေးပါ ပြဿနာ မရှိရင် ရိုးရိုးမွေးတာ ပိုကောင်းနိုင်ပါသလား။ ရိုးရိုးမွေးတဲ့အခါ Painless လဲ မွေးလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါကကော ဘယ်လို အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ။
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ “ဆန်းတာတိုင်းက ရိုးတာထက် နေရာတကာမှာ မသာပါ။” ကလေး-မီးဖွါးတာမှာ ရိုးရိုးမွေးတာ (မွေးလမ်းကြောင်းကနေတာ) က အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကနေ ဘာမှ အကူအညီ မပါဘဲ၊ ဓမ္မတာ-ထုံးစံအတိုင်း မွေးနိုင်တာက (ပါဖက်) ဖြစ်တယ်။ Painless childbirth လုံးဝမနာစေဘဲမွေခြင်းကို တပုဒ်ရေးပါရစေ။
မွေးလမ်းကြောင်းကနေ မွေးရာမှာ တခါတလေ ကူရတာတွေ ရှိတယ်။ သားဦးမွေးရင် မွေးလမ်းကို Episiotomy ချဲ့ပေး-ပြန်ချုပ်ပေးရတာ၊ သားအိမ်ညှစ်အား နည်းနေရင် Oxytocin (Syntocinon) ဆေးကို Drip ထဲထည့် သွင်းပေးရတာ၊ မညှစ်နိုင်လို့ ဒါမှမဟုတ် ကလေးခေါင်းထွက်တာ ကြာမနေစေချင်လို့ ညှပ်ဆွဲ၊ လေစုပ်စက်နဲ့ ဆွဲကူ မွေးပေးရတာ၊ ရေမြွှာကို စောဖေါက်ပေးတာတွေ ဖြစ်တယ်။
“ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေ ပြောတိုင်း မယုံရဲဘူး” လို့ မေးတဲ့သူပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ရန်ကုန်သာ မဟုတ်ပါ နယူးဒေလီ၊ ကိုလ်က္တတား၊ မဒရပ်စ်၊ မွန်မ်ဘိုင်၊ ဘန်ကောက်၊ ချဲင်န်မိုင်၊ အကုန်ပါဘဲ။ နေကောင်း ကျန်းမာတဲ့ မိခင်လောင်း တယောက်ဟာ ပြဿနာကင်းတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကနေ ပုံမှန် အရွယ်အစား ကလေးကို မွေးတယ်ဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပုံမှန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုး မဟုတ်နိုင်လို့ ခွဲမွေးရတာမှာ "မခွဲရင်လည်း ရနိုင်တယ်" ဆိုတာနဲ့ "ခွဲကိုခွဲရမှာ" နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
၁။ “ဘာလို့ ခွဲမွေးရသလဲ။” နောက်ကိုယ်ဝန် လာအပ်တော့ အရင်ကလေး ဘာလို့ခွဲမွေးရသလဲ မေးရင် ကောင်းကောင်း မဖြေတတ်ကြပါ။
၂။ “မခွဲရင် မရဘူးလား။” လူနာရှင်က ဆရာဝန် မမေးရဲကြတာ များတယ်။
၃။ “တကယ်ကို မရဘူးလား” ဆိုတာတွေ သိရလိမ့်မယ်။ ပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအတော်များများမှာ လူနာ-အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ မရကြပါ။ အုပ်ချုပ်သူတွေက ပြန်မေးတာ မကြိုက်သလို ဆေးရုံတွေကလဲ မကြိုက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
တချို့က နေ့ကောင်း-ရက်သာရွေး မွေးချင်သူတွေလည်း ရှိတယ်။ လူနာကလဲ “မခံနိုင်တော့ဘူးဆရာ ခွဲပေးပါတော့” ပြောလာသူလည်း မရှားပါ။ ဆရာဝန်က စိတ်မရှည်၊ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာကို နဲနဲလေးမှ မယူချင်လို့ ခွဲတာလည်း ရှိပါမယ်။ ဒီလို ဆရာဝန်မျိုးကို အပြစ်မတင်နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေကတော့ ခွဲပေးရင် လူနာဆီက ငွေပိုယူလို့ရတာမို့၊ အချိန်မစောင့်ဘဲ ခွဲတာလည်း တကယ် ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကစနစ် ကောင်းဘို့ ပွင့်လင်းမှု လိုတယ်။ လူတွေကနေ လူတွေကို ထိန်းနှိုင်တဲ့စနစ် ရှိရမယ်။ အုပ်ချုပ်သူကသာ ထိန်းတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးမှု အစစ် ရှိရမယ်။
ခွဲမွေးရတာမှာ တခြား ရွေးစရာလမ်း မရှိတာမို့ ခွဲမွေးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ မခွဲမဖြစ် နံပါတ်တစ်ကတော့ CPD ကလေးခေါင်းနဲ့ မိခင်မွေးလမ်း မတန်တဆ ဖြစ်တာ။ ဒါမှာလည်း (၂) မျိုး။ မအေရဲ့ အရိုးကွင်းက ကျဉ်းနေတာနဲ့ ကလေးက ပုံမှန်ထက် ခေါင်းကကြီးနေတာ။ ဒီအခြေအနေ နှစ်ရပ်လုံးက ခွဲကိုခွဲရပါမယ်။
နောက်တမျိုးက အချင်းဟာ ပုံမှန်ရှိရမဲ့ သားအိမ်အဝနဲ့ ဝေးရာမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ အောက်ပိုင်း ရောက်နေတာ။ အချင်းက သားအိမ်အဝကို အပြည့်ဖြစ်ဖြစ်၊ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်ဖြစ် လာဖုံးနေတာမျိုး။ အချင်းရှေ့ရောက်လို့ ခေါ်တယ်။ Ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) အဖြေမှာ Placenta low lying လို့ပါမယ်။ Covering internal Os လို့လဲ တွေ့နိုင်တယ်။ အဲလို ဖြစ်နေရင် မွေးခါနီးလို့ သားအိမ်အဝ ကျယ်လာတာနဲ့ အချင်း ကွာလာပြီး၊ ကလေးမမွေးခင် သွေးတွေဆင်းလာမယ်။ APH ခေါ်တာပေါ့။ မမွေးမီ သွေးဆင်းခြင်း အကြောင်းတရားတွေထဲက အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်။ ရက်ရွေးပြီး၊ အေးအေး ဆေးဆေး ခွဲမွေးပါလေ။
ဗိုက်ခွဲမွေးရစေတဲ့ မိခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
1. Placenta praevia အချင်းရှေ့ရောက်ဖြစ်နေလို့၊
2. CPD အရိုးကွင်းကျဉ်းလို့၊
3. မွေးလမ်းကနေ ကြိုးစားမွေးတာ မရတော့လို့၊
4. အရင် နှစ်ခါ ဗိုက်ခွဲမွေးထားလို့၊
5. ဆီးချိုမိခင် တချို့၊
6. တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါတွေ ရောဂါရှိနေလို့၊
ဗိုက်ခွဲမွေးရစေတဲ့ ကလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
1. Fetal distress မွေးနေတုံးကလေး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ မမှန်လို့၊
2. ကလေးအနေအထား ပုံမမှန်လို့၊ Breech တင်ပါးဆုံပြုခြင်း၊ Shoulder ပခုံးပြုခြင်း၊ Transverse ကန့်လန့်ဖြစ်ခြင်း၊
3. အရင်က မွေးရာဇဝင် မကောင်းလို့၊ ဥပမာ IUD အထဲမှာ ကလေးသေတာ၊ ခဏခဏ ကလေးပျက်တာ၊
4. Twins အမွှာကိုယ်ဝန်တချို့၊
5. သွေးစစ်တော့ Rh incompatibility မတူတဲ့တချို့၊
6. မိခင်မှာ HIV positive ဖြစ်နေတာ၊ (ဘီပိုးရှိတာမှာတော့ ၅ဝ% ဆရာဝန်တွေက ခွဲတယ်။)
7. Umbilical cord prolapse ချက်ကြိုးကြွံကျနေလို့။
ဗိုက်ခွဲရက်ရွေးနည်း ၂ မျိုး
1. Elective ရက်ရွေးခွဲခြင်း၊
2. Emergency အရေးပေါ်ခွဲခြင်း၊
ဗိုက်ခွဲနည်း ၂ မျိုး
1. Classical caesarean section (CS) အစဉ်အလာခွဲနည်း၊ သားအိမ် အပေါ်ပိုင်းမှာ ဒေါင်လိုက်ခွဲတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာစရာတွေကြောင့် မသုံးပါ။ ဒါပေမဲ့ သားအိမ် အောက်ပိုင်းမှာ Fibroids အသားပို အလုံး ရှိနေရင်၊ သားအိမ်ပါ ထုတ်လိုက်ဘို့ လိုရင်၊ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ရှိနေရင်၊ အချိန် သိပ်အလျင်လိုရင်တော့ ဒီနည်းသုံးပါမယ်။
2. Lower segment caesarean section (LSCS) သားအိမ်အောက်ပိုင်းက ကန့်လန့်ခွဲနည်း၊ အများဆုံး သုံးတယ်။ မေ့ဆေး၊ ခါးထုံဆေးနဲ့ ရိုးရိုးထုံဆေး တခုခုနဲ့ ခွဲနိုင်တယ်။
ဗိုက်ခွဲခြင်းရဲ့ အားကောင်းချက်တွေ = သွေးထွက်နည်းမယ်၊ ဗိုက်ထဲမှာ တွယ်ကပ်မှု နည်းတယ်၊ သားအိမ် ကြွက်သားကို သူ့အကြောအတိုင်းသာ ခွဲလို့ အထိနာ သက်သာတယ်၊ ပိုးဝင်ဘို့ အခွင့်နည်းတယ်၊ ခွဲပြီး ဗိုက်ကယ်တာ အဖြစ်နည်းတယ်၊ အဖိတ်အစင် နည်းတယ်၊ နောက်ကိုယ်ဝန်မှာ အချင်းက အထဲချုပ်ရိုးနေရာ လာမကပ်နိုင်ဘူး၊ သားအိမ်ကို လက်နဲ့ ကိုင်တွယ်ရတာ နည်းတယ်၊ ချုပ်ရိုး ပိုပြီး ခိုင်မာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်မှာ HIV ပိုးရှိနေရင် ကလးကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ၇ ပုံ ၁ ပုံရှိလို့ ဗိုက်ခွဲမွေးပေးရင် ကူးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း နည်းစေတယ်။ ရက်၊ အချိန်၊ ရွေးမွေးနိုင်တယ်။ တတိယကလေး ခွဲရရင် တခါတည်း သားကြော ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းဟာ ကလေးဖွါးတဲ့ဒဏ် မရှိ ဖြစ်နေပါမယ်။
ဗိုက်ခွဲခြင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေ = အနာလေးတခု ခွဲရတာဖြစ်ဖြစ် ခွဲမွေးတာဖြစ်ဖြစ် အနည်းနဲ့အများ သတိထား ရတာတွေ ချည်းပါဘဲ။ ခွဲစိတ်ခြင်း အန္တရာယ်တွေက ခွဲစိတ်မှုက ကြီးကြီးသလို၊ လုပ်တာကိုင်တာ ပေါ့ဆရင် ပေါ့ဆသလို ရှိနိုင်တယ်။ မေ့ဆေး-ထုံဆေး မှန်သမျှလဲ သတိထားစရာတွေ ရှိပါမယ်။ ဆီးအိမ် နဲ့ ဆီးဆင်းပြွန်ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ အထဲခွဲကြောင်း ချဲ့ရရင် သွေးထွက် များမယ်၊ အချိန် လုရတယ်၊ ပိုခက်တယ်၊ ကလေးက သိပ်ကြီးနေရင် ခက်မယ်။
ဗိုက်ခွဲမွေးတာမှာ သတိထားစရာတွေ ရှိတယ်။
• မိခင် = တခြား ဘယ်လိုခွဲစိတ်နည်းမှာမဆို ဖြစ်တတ်တဲ့ သတိထားစရာတွေသာ များပါတယ်။ ဥပမာ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရှော့ခ်ရခြင်း၊ အဆုပ်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ စတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ နဲနဲထူးနိုင်တာက မွေးပြီး ဆီး မသွားနိုင်ခြင်း။
• ကလေး = အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ ကလေးကို ခွဲဒါးထိခြင်း၊ မေ့ဆေးကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း။
• နောက်ပိုင်း ဆက်ဖြစ်နိုင်တာတွေ = အရင်ခွဲကြောင်းက နောက်ကိုယ်ဝန်မှာ ပေါက်ကွဲတာ၊ နောက်ကိုယ်ဝန်မှာ အရင် အမာရွတ် နေရာကို အချင်းလာတွယ်တာ၊ Incisional hernia ဗိုက်ခွဲကြောင်းက စူထွက်တာ။
ကိုယ့်ဖါသာ ဂရုစိုက်နိုင်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ နားပါ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစာစားပါ၊ အရည်များများ သောက်ပါ၊ ဝမ်းမချုပ်စေနဲ့၊ လျှောက်နိုင်တာနဲ့ လမ်းလျှောက်ပါ၊ အနာသက်သာဆေး နာရင်သောက်ပါ၊ အဝတ်အစား ချောင်ချိပါစေ၊ သန့်ပါစေ။ ခြောက်သွေ့ပါစေ၊ (ကော်တွန်) သာဝတ်ပါ။ အနာနေရာက ထူးပြီး နာတာ၊ ရောင်တာ၊ နီရဲတာ၊ မန်းရည် ထွက်တာ ချက်ချင်း သတိပြုနေပါ။ လေးပင်တာ မမနဲ့၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ် မလုပ်ပါနဲ့၊ လိင်ဆက်ဆံတာ ရှောင်ကျဉ်ပါ။
တခုမှတ်ဘို့က တခါ ဗိုက်ခွဲမွေးရတိုင်း နောက်လည်း ခွဲရမယ်လို့ နေရာတိုင်းမှာ ယူဆလို့မရပါ။ အရင်တခါ ခွဲတုံးက ဘာကြောင့် ခွဲရလည်း အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အချင်းရှေ့ရောက်လို့ ခွဲထားရသူဟာ နောက်ကိုယ်ဝန်က ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးမွေးလို့ ရတယ်။ ကလေးအနေအထား ဆိုတာလည်း တခါပုံမှန် မဟုတ်တိုင်း အမြဲမှား မနေတတ်ပါ။
(ဓါတ်ပုံ = ၁-၇-၂ဝ၁ဝ နေ့က ယမုန်နာဆေးခန်းမှာ မွေးဖွားတဲ့ကလေး)